Ihe ị ga-ahụ na obodo Ghent na Belgium | Akụkọ Njem
Ghent bụ obodo dị na northwest Belgium, na Flemish Region, na njikọta n'etiti osimiri Lys na Scheldt. N'ezie aha ya sitere na Celtic Ganda nke na-ezo aka na ntụgharị. Ọ nwere nnukwu ọnọdụ maka mgbapụ, ebe ọ bụ n'etiti Bruges na Brussels dị ọkara ọkara elekere site na abụọ. Na mgbakwunye, ọ nwere ogo nke ịbụ obodo Flemish nwere ụlọ akụkọ ihe mere eme kachasị.
Nke a obodo nwere nnukwu amara na otu agadi obodo nwere ọtụtụ ihe ncheta ịga leta. Ọ bụ nnọọ njem nleta obodo na nke mara mma nke ukwuu. Anyị ga-ahụ ihe niile ị na-agaghị echefu ma ọ bụrụ na ị gaa Ghent na njem na Belgium.
1 Chọọchị San Nicolás
2 Akwa San Miguel
3 Katidral St. Bavo
4 Nnukwu ulo nke Flanders
5 Graslei na Korenlei
6 Belfort ma ọ bụ Bell Tower
8 Hentlọ Nzukọ Ghent
Chọọchị San Nicolás
Nke a bụ otu n’ime ihe ncheta kacha ochie anyị nwere ike ịchọta n’obodo Gent. A na chọọchị malitere na-wuru ke Narị afọ nke XNUMX na ụdị ụdị Gothic nke mpaghara Scheldt. Ọ nọchiri anya ụlọ ụka ochie nke Romeesque nke ọkụ bibiri. Ọ kwụpụrụ maka nkume ya na-acha anụnụ anụnụ na nnukwu ụlọ mgbịrịgba ya. Site na ime ya, anyị nwere ike ịghọta etu ọkụ nwere ike isi na windo iko ya dị ọcha ma nweekwa akụkụ buru ibu. A raara ya nye Saint Nicholas n'ihi na ọ bụ ndị ahịa ahịa kwadoro ya, nke a bụ onye nchebe. Ọ bụrụ n’anyị chọrọ ịse nnukwu foto nke ụka, anyị nwere ike ịrịgo na Bell Tower a ma ama.
Akwa San Miguel
Na San Miguel Bridge anyị ga-enweta echiche kacha mma na foto nke obodo ochie nke Ghent. Ọ bụ akwa nke nkume mara ezigbo mma nke nwere ụlọ ochie n’akuku na n’akuku ulo-elu nke ulo ochie nile n’akuku. Site na ihe ndị a, anyị ga - ese foto kachasị mma nke obodo ochie nke Ghent. Ọ bụ ebe a toụrị ọ simplyụ nanị ịhụ etu obodo a si maa mma ma bụrụ ihe akụkọ. Na mgbakwunye, ịnwere ike ịgbazite njem nlegharị anya iji mụtakwuo banyere akụkọ ihe mere eme nke Ghent ma ọ bụ hụ akwa mmiri na gburugburu ya na njem ụgbọ mmiri.
Katidral St. Bavo
Saint Bavo bụ onye nchebe nke Ghent, ya mere a raara katidral ya nye ya. N'ebe ọwụwa anyanwụ Buildinglọ narị afọ nke XNUMX Ọ bụ ihe ọzọ dị mkpa nke na-ekwesịghị ịhapụ n'oge nleta ahụ. Ọ bụghị naanị na ụlọ ahụ dị mkpa n'ihi afọ ndụ ya, kamakwa n'ihi na ọ nwere ọtụtụ ọrụ nka nke dị oke mkpa. Ihe kachasị mkpa bụ Ofufe nke Nwa Atụrụ Mystic nke ụmụnne Van Eyck dere, bụ́ ndị e lere anya dị ka otu n’ime ọrụ ndị pụtara ìhè mgbe ochie na-ese ihe na Western Europe. Enwere ọrụ ndị ọzọ nwekwara mmasị dịka nke ahụ Saint Bavo abanye na ebe obibi ndị mọnk nke Ghent Nke Rubens.
Nnukwu ulo nke Flanders
Lọ a bụ Ebe nchekwa siri ike nke narị afọ nke XNUMX nke Felipe de Alsacia wuru, Count of Flanders. Taa ọ bụ otu n'ime echekwara nke ọma na Europe niile. Ọ dị na Osimiri Lys ma nwee ọnụ mmiri gburugburu ya iji bulie nchekwa ahụ. O nwere mputa mara mma ma ị ga-agakwa n’ime ya, nwere ọtụtụ ụlọ ebe a na-edebe ihe ngosi nka ebe a na-ekpughere akụkọ ihe mere eme n’obodo ahụ, nwere ọnụ ụlọ ịta ahụhụ ochie na Tower of Homage.
Graslei na Korenlei
Na mpaghara a ha hụrụ ọdụ ụgbọ mmiri kacha mkpa n’obodo ahụ, ya mere, ọ bụ mpaghara azụmahịa nke nwere nnukwu mmasị. N’akụkụ osimiri ahụ, e wuru ụlọ ndị mara mma nke ka dị mma taa, yabụ ọ bụ mpaghara na-adọrọ mmasị. A na-atụ aro ije ije n'akụkụ abụọ ma n'ehihie ma n'abalị, mgbe obodo na-enwu gbaa.
Belfort ma ọ bụ Bell Tower
Towerlọ elu a pụtara ìhè n'elu ụlọ ndị ahụ n'ihi mita 91 dị elu ya. Ọ bụ ụlọ nche ochie nke narị afọ nke XNUMX ka echekwara n'ụzọ zuru oke ma jiri ọla edo nke dragọn ahụ kpuchie ya. N'ime ị nwere ike ịga na ime ụlọ ya ebe a na-akọ akụkọ ihe mere eme nke ụlọ elu ahụ ma kpughee mgbịrịgba ochie ahụ, nke ha ji dọọ ụmụ amaala aka na ntị banyere ụfọdụ ihe egwu. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ nleta dị mkpa, ọkachasị maka echiche panoramic nke obodo Ghent site n'ụlọ elu.
Ebe a mara mma bụ ebe chọtara ahịa ọka wit a ma ama, ya mere ọtụtụ narị afọ gara aga, ọ bụ ebe nzukọ a na-enwe nzukọ. Taa, ọ ka bụ ebe nzukọ ahụ kama kama ịzụ ahịa, ndị njem nleta nwere ike ịnụ ụtọ ị Belụ biya biya ndị ama ama na ụlọ ọrụ ya. Ọ bụ ebe izu ike ma nwee ọ theụ na mkpọtụ nke obodo ahụ n'etiti ụlọ ochie ochie. Zuru okè maka nkwụsị mgbe nleta.
Hentlọ Nzukọ Ghent
Halllọ nzukọ obodo bụ ụlọ ochie nke na-adọta mmasị n'ihi na ọ bụ wuru n’udi di iche-iche. Otu n'ime ha bụ Gothic na onye ọzọ Renaissance, ha abụọ dị iche. Nwekwara ike ịga n'ime hụ ebe dị ka Udo Udo ma ọ bụ ụlọ Arsenal.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Belgium » Ihe ị ga-ahụ na Ghent
Oymyakon, ebe oyi na-achị